Dhata Hutsanana: Yekukurumidza Nongedzo Kune Dhata Unganidza Kuchenesa | Martech Zone
Kubatanidza purge ibasa rinokosha rekuita bhizinesi sekushambadzira kwakananga tsamba uye kuwana sosi imwe yechokwadi. Nekudaro, mazhinji masangano achiri kutenda kuti iyo yekubatanidza kuchenesa maitiro inongogumira kune matekinoroji eExcel uye mabasa anoita zvishoma kwazvo kugadzirisa zvinodikanwa zvinowedzera zvakaoma zvehunhu hwe data.
Iri gwaro richabatsira vashandisi vebhizimusi uye veIT kuti vanzwisise kubatanidza purge maitiro, uye pamwe nekuvaita kuti vazive kuti nei zvikwata zvavo zvisingachagone kuenderera nekubatanidza nekuchenesa kuburikidza neExcel.
Chii chinonzi Merge Purge Maitiro kana Basa?
Sanganisa purge inzira yekuunza akati wandei sosi yedhata munzvimbo imwechete uye panguva imwechete uchibvisa zvakaipa marekodhi uye zvakapetwa kubva kunobva.
Inogona kungotsanangurwa mumuenzaniso unotevera:
Cherekedza kuti iwo mufananidzo uri pamusoro une matatu akafanana marekodhi ane akawanda nyaya ane hukama ne data data. Pakushandisa iyo merge purge basa kune ino rekodhi, inozoshandurwa kuita yakachena uye imwechete kuburitsa senge muenzaniso pazasi:
Pakusanganisa uye kuchenesa zvakapetwa kubva kune akawanda masosi edata, mhedzisiro inoratidza yakasimbiswa vhezheni yechinyorwa chepakutanga. Imwezve ikholamu [Indasitiri] yakaiswa kune iyo rekodhi, yakatorwa kubva kune imwezve vhezheni yechinyorwa.
Kuburitswa kweye merge purge maitiro inogadzira marekodhi ane yakasarudzika ruzivo iyo inoshanda iro bhizinesi chinangwa che data. Mumuenzaniso wepamusoro, kana uchinge wagadziriswa, iyo data ichashanda seyakavimbika iyo inovimbika kune vatengesi mumakambani emakambani.
Maitiro Akanakisa Ekubatanidza uye Kubvisa Dhata
Kunyangwe paine indasitiri, bhizinesi, kana saizi yekambani, sanganisa nzira dzekuchenesa dzinoshanda sehwaro hwezvinangwa zvekuita-dhiraivha. Kunyangwe iko kurovedza kwacho kwaingove kungogumira mukubatanidza nekubvisa, nhasi kubatanidza uye kuchenesa kwashanduka kuita chinhu chakakosha chinoita kuti vashandisi vaongorore dhata ravo zvakadzama.
Kunyangwe maitiro acho ari kunyanya kugadzirwa iye zvino kuburikidza neakawanda Unganidza purge software uye maturusi, vashandisi vachiri kuda kuchengetedza iwo akanakisa maitiro e data kusanganisa kuchenesa. Izvi zvinotevera zvimwe zvandinokurudzira zvikuru kuti utevere:
Kuramba Wakatarisa paData Hunhu: Usati waita merge purge oparesheni, zvakakosha kuti uchenese uye umise data, nekuti izvi zvinoita kuti deduping maitiro ave nyore. Kana iwe ukadzika pasina kuchenesa data, mhedzisiro yacho inongokuodza moyo.
Kunamatira kune Chaicho Chirongwa: Izvi zvinoitika kana iri nyore data yekubatanidza maitiro haisi yekutanga kwauri. Zvinokurudzirwa kuti iwe ugadzire chirongwa icho chinobatsira kuongorora mhando yemarekodhi auri kutsvaga kuti ubatanidze uye kuchenesa.
Kugadziridza Yako Dhata Muenzaniso: Kazhinji, mushure mekutanga kubatanidza purge maitiro, makambani anovandudza kunzwisiswa kuri nani kwemhando yavo yedata. Kamwe kunzwisiswa kwekutanga kwemodheru yako, iwe unogona kugadzira KPIs uye kudzikisira iyo nguva iri kushandiswa pane yakazara maitiro.
Kuchengeta Rondedzero Yemazita: Kuchenesa rondedzero hazvireve kuti kubvisa runyorwa zvachose. Chero chero data rinosanganisa purge software rinozoita kuti iwe ugone kuchengetedza zvinyorwa uye chengetedza dhatabhesi yeshanduko yega yega yakaitwa kune iyo runyorwa.
Kuchengeta Sosi Imwe Yechokwadi: Kana data remushandisi rikawanikwa kubva kumarekodhi akati wandei, kusawirirana kunotarisana nekuda kweruzivo rwakasiyana. Mune ino kesi, kusanganisa uye kuchenesa kunobatsira kugadzira imwechete sosi yechokwadi. Izvi zvinosanganisira zvese zvinodiwa nezve mutengi.
Izvo Zvakanakira Zvekuzvishandira-Unganidza Unganidza Software
Mhinduro inoshanda yekugadzira sosi imwe yechokwadi uchiita chokwadi chekutevera yakasarudzika maitiro, iri kubatanidza purge software. Chimbo chakadai chinonyora zvinyorwa zvekare zvichishandisa ruzivo rutsva kuburikidza nedanho rekupona kwedata.
Zvakare, kuzvishandira-wega kusanganisa maturusi anokwanisa kugonesa vashandisi vebhizinesi kunyatso kusanganisa uye kuchenesa marekodhi avo edhata pasina kuita kuti zvive zvakakosha kuti vave nehurongwa hwekuronga ruzivo kana ruzivo.
Iyo chaiyo yekubatanidza purge chishandiso inogona kubatsira bhizinesi vashandisi ne:
Kugadzirira data kuburikidza nekuongorora zvikanganiso uye ruzivo kuenderana
Kuchenesa uye kugadzirisa data maererano nemitemo yakatsanangurwa yebhizinesi
Kufananidza akawanda runyorwa kuburikidza nemubatanidzwa weakagadzika algorithms
Kubvisa zvakapetwa nehurefu hwechokwadi
Kugadzira zvinyorwa zvendarama uye kuwana imwechete sosi yechokwadi
Pasina mubvunzo kutaura, munguva iyo otomatiki yakave yakakosha mukubudirira kwebhizinesi, makambani haakwanise kunonoka kugadzirisa data ravo rebhizinesi. Nekudaro, yazvino dhata inosanganisa / yekuchenesa maturusi izvozvi zvave mhinduro yekumusoro yezera rekare matambudziko ane hukama nemaitiro akaomarara ekubatanidza uye kuchenesa data
Dhata rekambani ndechimwe chezvinhu zvavo zvakakosha - uye kungofanana nechero imwe nhumbi, dhata rinoda kuchengetedzwa. Kunyangwe makambani ave laser akatarisana nekuwana huwandu hweruzivo uye nekusimbisa yavo yekuunganidza data, iyo yakawanikwa data inopedzisira yasara yakarara uye kutora inodhura CRM kana nzvimbo yekuchengetera kwenguva yakareba yenguva. Mumamiriro ezvinhu akadaro, iyo data inoda kucheneswa isati yaiswa pakushandiswa kwebhizinesi.
Nekudaro, maitiro akaomarara ekubatanidza / kuchenesa anogona kurerutswa kuburikidza ne-one-stop merge purge software iyo inokubatsira iwe kubatanidza masosi edata uye kugadzira marekodhi akakosha chaizvo.
Data Ladder ikambani yemhando yepamusoro software yakatsaurirwa kubatsira vashandisi vebhizinesi kuwana zvakanyanya kubva kudhata yavo kuburikidza nekufananidza dhata, profiling, kudzikisira, uye maturusi ekuvandudza. Kunyangwe iri kuenzanisa mamirioni ezvinyorwa kuburikidza neyedu isinganzwisisike algorithms, kana kushandura yakaoma data yechigadzirwa kuburikidza nesemantic tekinoroji, Dhata Ladder's data mhando maturusi anopa yakakwira nhanho yebasa isingaenzanisike muindasitiri.
Dhawunorodha YeMahara Muedzo
Tags: kuchenesa kerokero geocodingkuongorora kerocrm dhataDatakupatsanura dhatadata yekuchenesa sevhisikuvandudza datahutsanana hwe datamanera e datadata mechikudhinda datadata datadata yemhando manejimendidatamatchdatamatch bhizinesikudzikisiradata rebhizinesikuenzanisa algorithmsbatanidza purgechigadzirwa mechirekodhi kubatanidzaisina kurongeka dataisina kurongeka dhataunstructured data kuchenesa
Javeria Gauhar, ane ruzivo rweB2B / SaaS munyori anonyanya kunyora mukunyora indasitiri yekuchengetedza data. KuData Ladder, anoshanda seMushambadziro Executive, anoona nezvekushandisa nzira dzekutengesa dziri mukati. Iye zvakare ari programmer ane makore maviri echiitiko mukuvandudza, kuyedza uye kuchengetedza bhizinesi software kunyorera.